HS:-Wararka naga soo gaaray degmada Ceel Barde oo ka tirsan gobolka Bakooll ayaa sheegaya in halkaas maalmaha sopo socda looga dhawaaqayo maamul ka madax banaan koofur Galbeed xili ay meel xun mareyso qilaafka u dhaxeeya Shariif Xasan iyo Ahmed Madoobe.
Degmada Ceel Barde oo ku taala dhinaca waqooyi ee gobolka Bakool ayaa waxaa ku sugan siyaasyiin u abdan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federalka iyo masuuliyiin ka socda maamulka Juba sida warar sugan lagu helayo.
Dhinaca kale waxaa fashil xoogan ku dhaw inuu qabsoomo shirkii lagubalansanaa inuu ka dhaco magaalada Kismaayo bisha Janaayo waxeyna wararku sheegayan in aysan shirkaas ka qeybgaleyn masuuliyiinta maamulka KG sida ay inoo xaqiijiyeen waxgarad ka soo jeeda degaankaan kuna sugan Baydhabo.
Marka laga soo tagoo abaabulka ka socda degmada Ceel Barde dhianca kale Shariif Xasan ayaa lagu soo waramayaa isaguna inuu ciidamo u diray gobolka Bakool maadaama uu had adegmada Ceel Barde ka socdo shir loogu sameynayo maamul u gaar ah oo aan hoos tagin Shariif Xasan.
Xaalka ayaa u muuqda mid si toos ah ugu dhaxeeya Ahmed Madoobe iyo Shariif Xasan
· admin on December 24 2015 14:12:07 · 0 Comments · 1185 Reads ·
14,934,225 unique visits